Mourinho oo weerar culus ku qaaday ciyaartoyda Barcelona, kaddib guuldaradii niyadjabka ahayd ay xalay kala kulmeen Liverpool – Gool FM
Mourinho oo weerar culus ku qaaday ciyaartoyda Barcelona, kaddib guuldaradii niyadjabka ahayd ay xalay kala kulmeen Liverpool
Dajiye May 8, 2019
(Yurub) 08 Maajo 2019. Tababarihii hore ee kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa weerar culus ku qaaday ciyaartoyda Barcelona, kaddib guuldaradii niyadjabka ahayd ay xalay kala kulmeen kooxda reer England ee Liverpool.
Hadalka Jose Mourinho ayaa wuxuu imaanayaa kaddib markii shabaqooda laga dhaliyay in ka badan 3 gool, sanadkii 2-aad ee xiriir ah tartanka Champions league, iyadoo lagu xasuusto in xili ciyaareedkii hore ay guuldaro 3-0 ah kala kulmeen kooxda Roma.
Hadaba macalinka reer Portugal oo xalay ku sugnaa Istuudiyaha beIN SPORTS inta ay ciyaarta socotay ayaa wuxuu yiri:
“Marka aad aragto natiijo sidan oo kale ah, waa inaad sidoo kale ka hadashaa burburka jira, Barcelona si la yaqaano ayay u burburtay, waa wax aad u adag in sharaxaad laga bixiyo”.
“Waa wax aad u adag in la aamino koox ku soo adkaatay 3-0, in kulanka lugta labaad ay ku guuldareysato 4-0”.
Intaas kaddib Jose Mourinho ayaa wuxuu si gaar ah kaga hadlay goolka 4-aad uu kooxda Barcelona ka dhaliyay Divock Origi wuxuuna yiri:
“Waxaan ka hadleynaa ciyaartoyda ugu fiican adduunka, inaad la kulanto goolkaan oo kale, waxaa kuu muuqaneysa xaalada maskaxeed ee kooxda Barcelona”.​
​“Kooxdan waxay heysataa qaar ka mid ah ciyaartoyda aduunka ugu fiican, waxaa muhiim ahayd in booskooda uu noqdo kulamada finalka xili ciyaareed kasta”.
Ugu dambeyn Jose Mourinho ayaa xaqiijiyay in xitaa tababare Ernesto Valverde uu wax marmarisyo ah u sameeyo wixii xalay ka dhacay garoonka Anfield wuxuuna yiri:
“Sidee u caddayn kartaa wixii ka dhacay Liverpool? Runtii waa wax aad u adag, waxaan jeclaan lahaa inaan arko Valverde oo isku dayaayo in wax sharaxaad ah uu ka bixiyo wixii dhacay, laakiin weli waxaan qabaa inay adag tahay in la sharraxo”.
Muxuu ka yiri Luis Suarez ceybtii xalay kooxda Barcelona kasoo raacday garoonka Anfield???
WAR CUSUB: Messi oo la Dagaalay taageerayaasha kooxdiisa Barcelona iyo ilaalada oo soo kala dhex gashay....(Sidee wax u dheceen??)